October 2021 – Grab Love Story
ကျွန်မနာမည် နှင်းဆီ ပါ ရန်ကုန်မှာ..ကွန်ပြူတာသင်တန်းလာတတ်တာပါ။ ဇာတိကနယ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာပေါ့။ ရန်ကုန်မှာကတော့..မီးရဲ့.ဦးလေးတော်တဲ့ ဦးမောင်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့.သင်တန်းတက် ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်စကတော့……ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့ရှင်.အသက်က..18ပြည့်ပြီးလို့မှ..3လလောက်ပဲ ရှိသေးတာလေ.. ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တော့.စာရင်းကိုင်နဲ့.ကွန်ပြူတာသင်တန်းလာတတ်တာပေါ့ရှင်။ ဦးမောင်အိမ်မှာနေရတာက..နေရေး၊စားရေး.အစစအရာရာအဆင်ပြေပါတယ်..အဖေကလည်း ..ဦးမောင်ဆီမှာသေချာအပ်သွားတာလေ.. ဦးမောင်တို့လင်မယားကလည်း.မီးကို.ဂရုစိုက်ပါတယ်. အိမ်မှာက.ဦးမောင်ရယ်.ဦးမောင်ဇနီး…..သူ့သား..မောင်လေး ဇော်ဇော်ရယ်ပဲရှိပါတယ်.. မောင်လေးက.ခုမှ 8တန်းပဲရှိပါသေးတယ.်..မီးက.သူ့ကို.ညညဆို.စာသင်ပြရတာပေါ့..ဦးမောင်တို့က..တစ်ခန်းအိပ်ပါတယ်။ မီးကတစ်ခန်း..မောင်လေးဇော်က.တစ်ခန်းပေါ့။ တစ်ညပေါ့.ရှင်..မီးညဖက်..အပေါ့အပါးသွားချင်တာနဲ့.အိမ်နောက်ဖေးဖက်ကို ထွက်အလာမှာပေါ့… ..ဦးမောင်တို့.အခန်းကနေ..အသံတွေကြားနေရတယ်။..မီးလည်း.အပျိုလေးပဲလေ. .ဘာအသံလဲဆိုတာ …
နေမင်း တောင်ကြီးသို့ပြန်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်။ချစ်ရတဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးကို ခွဲရပြန်ဦးမည်။သူတောင်ကြီးတွင် ခြောက်လကျော်လောက်ပြီတာဝန်ကျနေတာ။အစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုတွင် အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတောင်ကြီးမြို့နားတွင် စီမံကိန်းတစ်ခု၌တာဝန်ခံအဖြစ်စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမို့ ငြင်းဆိုခွင့်မရှိပဲ ကျရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ဇနီးနှင့်သမီးကို ထားခဲ့ရပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျသည့်အချိန်မှစပြီး သမီး သုံးနှစ်ကျော်လာသည်အထိ အကြာကြီးမခွဲဖူးသောကြောင့် ရောက်စရက်များတွင် သတိရလွမ်းမိသည်။သမီးကလဲ ခွဲစမရှိ ဇနီးကလဲ မခွဲဖူးသောကြောင့် ညတိုင်းဖုန်းပြောရင်း အလွမ်းပြေရသည်။ခြောက်လကျော်တော့ ရုံးချုပ်မှ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုနှင့် …
ကျွန်မကတော့ ပြုံးလဲ့လဲ့ ပါ။ အသက်ကတော့ ၄၄ ဆိုပါတော့။ အမျိုးသားက သဘောင်္သားအရာရှိလေ။ သူကအရာရှိဆိုတော့ ၀င်ငွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ သူက ခြောက်လမှတစ်ကြိမ်လောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် တိုက်နဲ့ခြံ။ ကိုယ်ပိုင်ကားက သုံးစီး။ ပြီးတော့ ကျွန်မလည်းတစ်ယောက်ထဲပြင်းတာနဲ့ မြို့မဈေးမှာ ဖုန်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာက အခုဆိုရင် …
မြကျွန်းညို ဖိုရမ်မှ ဖိုးနောင် ကူးယူ တင်ပြသည်။အသက်အစိတ်မှာ ပုခက်မချိတ်ရရင် တစ်သက်မနိတ်ဘူး ဆိုတဲ့စကားရှိပေမယ့် ညိုမောင်အဖို့ကတော့ အသက်(၂၆)နှစ်ရောက်မှ ရှားရှားပါးပါး ရည်းစားလေးတစ်ယောက် ရခဲ့ရသည်။ ရမဲ့ရတော့လည်း ညိုမောင်ရည်းစား လေးငယ်က ညိုမောင်ထက် အသက်(၇)နှစ်လောက် ငယ်သည်။ လေးငယ်အသက်က ခုမှ (၁၉)နှစ်သာရှိသေးသည်။ အသက်ကြီးမှ ရည်းစားလေးတစ်ယောက်ရတော့ ညိုမောင်မှာ …
ကျုပ်ကလင်းထင်ပါ။ ကုပဏ္ဏီတစ်ခုရဲ့အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်မိန်းမက နွယ် တဲ့။ ချစ်ရကောင်းတယ်သူက။ ကျုပ်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပေါင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိတယ် ဝေဖြိုးတဲ့။ သူနဲ့ကျုပ်နဲ့က ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်တွေ။ဒီကောင်ကမိန်းမ မရသေးဘူး။ ရမယ့်ပုံလည်းမရှိပါဘူး အရက်သမားကိုး။ ရုပ်ကလည်းဆိုးတဲ့အထဲပါတယ်ဗျ။ သူနဲ့ကျုပ်နဲ့က ကျောင်းမှာကတည်းကသောက်ဖော်သောက်ဖက် တွေ။ ကျုပ်ကတော့အရက်ကြိုက်တဲ့အထဲမပါဘူး။ သူကတော့အရက်သမားကိုဖြစ်နေတာ။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်က ကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းက အရက်လေးသွားသောက်လိုက်၊ …
တစ် စက် မ ကျန်
သွားတက်လေး များ ပေါ်အောင် ရီပြီး သူ့ကို အိုးမည်း သုတ်ရန်ကြံ နေသော ခလေးမရဲ့ လက်ကောက် ဝတ် နှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ သူရ တယောက်ပျော်မြူးနေ မိသည်။ သူ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံး လေး နှစ်လောက် က စပြီး သံယောဇဉ် ဖြစ်မိသူလေး …
အီ စိမ့် တွက် သွား အောင် ကောင်း တယ်
ကျောင်းဆရာမလေးဆွေဆွေမြင့်တယောက် ထမင်းစားနားချိန်ဝယ် ဖုန်းဖွင့်လိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ် သုံး နေခိုက် မက်စင်ဂျာကနေစာပို့တာတွေ့လိုက်သည် အော်…ကျော်ကို့ဆီကကိုး ” ဟိုင်း! ထမင်းစားပြီးလား ဆွေဆွေ ” သူမ ချစ်သူဟောင်းပေါ့ အခုတော့အိမ်ထောင်ကိုယ်စီ နဲ့ဖြစ်နေကြပါပြီ… ” အေး ပြီးပြီ နင်အခုဘာတွေလုပ်နေလည်း” ” ငါလား စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လျှောက်သွားနေတာဟ အခုတောင်နင်စာသင်နေတဲ့ရွာနားကငါ့ဦးလေးစိုး …
အ ချိန် ပို ဆင်း သွား သည်
ကျနော်အမေက ကျနော်၆တန်းနှစ်မှာ ဆုံးသွားတယ်၊ တစ်ဦးတည်းသောသား အဖေနဲ့ပဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ရတာပေါ့၊ ကျနော် ၉ တန်းရောက်တော့ အဖေက ညဖက် အိမ်ပြန်လာရင် အရက်တွေသောက်ပြီး ပြန်လာတတ်လာပြီ။အဖေအရက်တွေ မူးနေရင်တော့ ဘာမှမပြောတတ်ပဲအိပ်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး တန်းအိပ်တော့တာ၊ အဖေက သန်တုန်းမြန်တုန်းဆိုတော့ အသက် ၄၀ …
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အသက် (၁၃)၊ (၁၄)နှစ်လောက်မှာ ရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ကာစဖြစ်သည်။ အစပထမမှာ လစဉ်မမှန်သေးပေမယ့် ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ အစပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာလစဉ်မှန်သွားပါသည်။ဒီလိုရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟိုမုန်းဓါတ်တွေဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုများ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ …